Fepetra ara-pahasalamana :: Mahasarotra amin’ny fampodiana Malagasy ny toeram-pandraisana • AoRaha
Fepetra ara-pahasalamana Mahasarotra amin’ny fampodiana Malagasy ny toeram-pandraisana
Nitondra fanazavana manoloana ny antony tsy mbola aneken’ ny fitondram-panjakana ny fampodiana an’ireo teratany malagasy tavela any ivelany ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Tehindrazanarivelo Djacoba Liva, tamin’iny herinandro lasa iny. Mitoetra ho olana ny fahafahana mandray azy ireo manoloana an’ ireo fepetra ara-pahasalamana takian’ny vanim-potoan’ny hamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao.
“Ankoatra ny tahotra amin’ ny fihanaky ny tsimok’aretina “Covid-19” mety ho azo avy any ivelany dia tsy ampy an’ireo olona roanjato sy arivo mangataka ny hiverina eto Madagasikara ny toerana handraisana sy ny fitaovam-pitsaboana ilaina amin’izany”, hoy ny minisitry ny Raharaham-bahiny tamin’ny antso an-tariby.
Marihina fa tsy maintsy manaja ny fepetra fitokana-monina sy fihibohana, ankoatra ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ireo rehetra miditra amin’ny sisintanin’i Madagasikara, ho fiarovana amin’ny valanaretina coronavirus. Nambaran’ny minisitra Tehindrazanarivelo Djacoba Liva kosa “ny fisian’ny fiaraha-miasa amin’ireo masoivoho malagasy any ivelany sy ny fitondram-panjakana isaky ny firenena misy azy ireo amin’ny fahafahana manampy an’ireo teratanintsika izay sahirana sy efa lany vatsy”.
Teratany malagasy monina sy mila ravinahitra any Etazonia, Inde, Frantsa ary aty amin’ny Kaontinanta Afrikana no tena maro amin’ireo mangataka hody eto Madagasikara.
Fanampiana ny marefo :: Hahazo tohana ireo manana fahasembanana
Fitaterana olona an-tsokosoko :: Naiditra am-ponja ny lehiben’ ny ATT Vakinankaratra